Gịnị Mere na Udo Adịghị n’Ụwa?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Lingala Lithuanian Luo Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Gịnị mere na ụmụ mmadụ enwebeghị ike iweta udo n’ụwa?
Ọ bụ naanị ọchịchị nke nwere ike ime ka ndị mmadụ gbanwee obi ha ga-eme ka udo dị n’ụwa
Baịbụl kwuru ihe abụọ kpatara ya. Nke mbụ bụ na Chineke ekeghị ụmụ mmadụ ka ha na-achị onwe ha n’agbanyeghị na ha emepụtala ọtụtụ ihe magburu onwe ha. Nke abụọ bụ na Baịbụl kwuru na “ụwa dum dị n’aka ajọ onye ahụ,” ya bụ, Setan bụ́ Ekwensu. Ọ bụ ya mere na mbọ niile ụmụ mmadụ gbarala iweta udo n’ụwa ji kụọ afọ n’ala.—Gụọ Jeremaya 10:23; 1 Jọn 5:19.
Ihe ọzọ mere na ụmụ mmadụ enwebeghị ike iweta udo n’ụwa bụ na ụmụ mmadụ na-achọ ihe ga-abara naanị ha uru. Udo ga-adị n’ụwa ma ọ bụrụ na e nwee otu ọchịchị na-achị ụwa dum nke ga-akụziri ụmụ mmadụ ka ha na-eme ihe ọma ma hụ ibe ha n’anya.—Gụọ Aịzaya 32:17; 48:18, 22.
Ònye ga-eweta udo n’ụwa?
Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ekwela nkwa na ya ga-eweta otu ọchịchị nke ga na-achị mmadụ niile. Ọchịchị a ga-anọchi ọchịchị ụmụ mmadụ. (Daniel 2:44) Ọ bụ Ọkpara Chineke bụ́ Jizọs, onye bụ́ Onyeisi Udo, ga na-achị ụwa mgbe ahụ. Ọ ga-eme ka ihe ọjọọ niile dị n’ụwa kwụsị ma kụziekwara ụmụ mmadụ otú ha na ibe ha ga-esi na-ebi n’udo.—Gụọ Aịzaya 9:6, 7; 11:4, 9.
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ nde mmadụ n’ụwa niile na-eji Baịbụl akụziri ndị mmadụ otú ha na ndị ọzọ ga-esi na-adị n’udo. Ọ bụ Jizọs na-eduzi ọrụ a ha na-arụ. N’oge na-adịghị anya, udo ga-adị n’ụwa niile.—Gụọ Aịzaya 2:3, 4; 54:13.
Ahụhụ Alaeze Chineke
Olee otú ndụ ga-adị n’ụwa ọhụrụ mgbe ọ ga-aghọ paradaịs?
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE Jun 2013 | Olee Mgbe Ịkpọasị Na-agaghị Adịkwa n’Ụwa?